Fanirian’i Netzahualcóyotl López, mpitantana ny kaonty Twitter @ActLenguas mandritra ny herinandron’ny 29 Avrily ka hatramin’ny 5 May ny hisian’ny fitenin-janatany amin’ny aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Avrily 2019 5:21 GMT
Sary nomen'i Netzahualcóyotl López
Mandritra izao taona 2019 izao izahay manasa olona maro hifandimby hitantana ny kaonty Twitter @ActLenguas (Fahavitrihana ara-piteny) sy hizara ny niainan-dry zareo tamin'ny famelomana indray sy tamin'ny fampiroboroboana ny fitenin-drazan-dry zareo. Miresaka momba an'i Netzahualcóyotl López (@tunchakua) ity lahatsoratra ity sy izay kasainy horesahana mandritra ny herinandro maha-mpampiatrano azy.
Avy any Yucuhiti, Oaxaca aho. Miteny Mixtec avy ao atsimo andrefana. mpiondana fampivelarana rindrambaiko aho ary manampy amin'ny famangitana ny fitety Firefox any Mixtec atsimo andrefana na amin'ny endrika finday na amin'ny endrika vala (web). Efa nandrafitra fampiasa ianarana Mixtec ihany koa aho.
Efa mihahita kokoa amin'ny tranonkala ny fiteny Mixtec, toy ny amin'ny fanentanana Facebook sy amin'ny fampiasa fandikanteny an-tserasera. Fampiatiana izay andalam-pivoarana hatrany izany. Na eo aza anefa izany fisian'ny fiteny Mixtec amin'ny aterineto izany dia mbola ilaina hatrany ny manao fanairana mba ahafahan'ny mpiteny teratany mamelona indray ny fiteny Mixtec ao amin'ny vondrom-piarahamonina, voalohany amin'izany eo amin'ireo taranaka vaovao.
Ny fisian'ny fiteny zanatany eo amin'ny teknolojia.
Hatsarana tahaka ny ahoana moa izany mahita ny fiteniko amin'ny aterineto izany. Enga anie hanohy amin'ny fitenenana azy ny taranaka vaovao ary hanohy amin'ny fikolokoloana aza miampita isa-taranaka.